Intuu Baabuloon Joogay Daanyeel Boqortooyada Ilaahay Buu Wax ka sii Sheegay | Farriinta Kitaabka
Mustaqbalkii Baa Nebi u Muuqday
Daanyeel Boqortooyada Ilaahay iyo imanshada Masiixa buu wax ka sii sheegay. Baabuloon way dhacday
DAANYEEL wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo si yaab leh u qumman. Yeruusaalem intaanan la baabbiʼin maxaabiis ahaan baa Baabuloon loogu kaxeeyay. Isaga iyo Yuhuud kale oo la socotay xorriyad xoogaa ah baa la siiyay. Daanyeel nolol dheer buu Baabuloon ku lahaa Yehowahna aad buu barakeeyay. Wuxuu xitaa ka baxsaday bohoshii libaaxyada oo dhacdooyin mustaqbalka fog baa loo muujiyay. Waxyaalaha uu Daanyeel sii sheegay kuwa ugu muhimsan waa Masiixa iyo maammulkiisa.
Daanyeel Masiixa goortuu iman doono buu ogaaday. Daanyeel waa loo sii sheegay markay dadka Ilaahay fili karaan imanshada Masiixa “Kan subkan oo ah amiirka.” Wuxuu iman doonaa 69 toddobaad oo sanadood kaddib markuu amarka rakibidda iyo dhisidda derbiyada Yeruusaalem soo baxo. Toddobaad caadi ah wuxuu ka kooban yahay toddoba maalmood toddobaad sanadoodna toddoba sanadood. 455 C.H. in badan waqtigii Daanyeel kaddib baa amarkii Yeruusaalem ku saabsanaa la dhiibay. Sanadkaas bay bilaabteen 69kii “toddobaad” oo 483 sanadood bay socdeen oo sanadkii 29 C.D. bay dhammaadeen. Casharka ku xigo baan ka arki doonnaa waxa dhacay sanadkaas. Daanyeel wuxuu xitaa sii arkay in Masiixa ‘la gooyn doono’ oo la dili doono kafaaraggudka dembiga awgiis.—Daanyeel 9:24-26.
Masiixa samaduu Boqor ku noqon doonaa. Daanyeel si gaar ah baa loogu muujiyay samada. Halkaas wuxuu ka arkay “mid u eg wiilkii aadan aha” oo ah Masiixii oo ku dhowaanayo carshiga Yehowah qudhiis. Yehowah wuxuu isaga siiyay “dowladnimo iyo ammaan iyo boqortooyo.” Boqortooyadaas weligeed bay jiri doontaa. Daanyeel wax kale oo yaab leh buu ka bartay Boqortooyada Masiixa. Wuxuu ogaaday in Boqorka maammulkiisa la wadaagi doono kuwo kale oo la yiraahdo “quduusiinta Ka ugu Sarreeya.”—Daanyeel 7:13, 14, 27.
Boqortooyadu dowladaha dunidan way baabbiʼin doontaa. Ilaahay wuxuu Daanyeel siiyay kartida u ku fasiro riyo wareerisay Nebukadnesar Boqorkii Baabuloon. Boqorkii wuxuu ku riyooday ekaanta nin weyn. Madax dahab ah buu lahaa iyo laab iyo gacmo lacag ah iyo calool iyo bowdooyin naxaas ah iyo lugo bir ah cagihiisuna bir dhoobo ku qasan bay ahaayeen. Dhagax buur laga soo gooyay baa cagaha kaga dhacay oo ekaantii ninku way burburtay oo budo bay noqotay. Daanyeel wuxuu sharxay ekaanta ninka qaybihiisu inay yihiin dowlado dunida ugu awood badan oo isku xigxigay. Madaxa dahabka ah wuxuu matalayay Baabuloon dowladda ugu horreysay. Waqtiga dunidan sharka leh dowladdeeda ugu dambeysa Daanyeel wuxuu sii sheegay in Boqortooyada Ilaahay adduunka wax ka qaban doonto. Dowladaha dunidan oo dhan bay wada jejebin doontaa oo baabbiʼin doontaa dabadeedna weligeed bay maammulka qaadan doonta.—Daanyeel qaybta 2.
Daanyeel markuu oday ahaa wuxuu arkay sidii Baabuloon loo qabsaday. Sidii nebiyadii sii sheegeen Boqorkii Kuuros baa magaalada qabsaday. Waqti aan badnayn kaddib 70kii sano oo dhulkoodii cidloobay wuu dhammaadday. Yuhuudi maxaabiisnimadoodii way ka xoroobeen. Aakhirkii Yuhuudi waxa hoggaamiyay taliyayaal, wadaado iyo nebiyo aammin ah siday dib u dhisaan Yeruusaalem iyo macbudkii Yehowah. Laakiin maxaa dhici doono dhammaadka 483ka sanadood kaddib?
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay buugga Daanyeel.
Daanyeel muxuu ka ogaaday Masiixa iyo Boqortooyada Ilaahay?
Maxay Boqortooyada Ilaahay ku sameyn doontaa dowladaha dunidan?
Wadaag Wadaag Mustaqbalkii Baa Nebi u Muuqday